Ndinotsvagawo murume anoda kuroora . . . | Kwayedza
Ndinotsvagawo murume anoda kuroora . . .
07 Aug, 2015 - 00:08	 2015-08-07T05:31:48+00:00 2015-08-07T00:00:39+00:00 0 Views
MAKADINI? Ndinotsvagawo murume anoda kuroora. Ndine makore 33 nevana 2 uye ndiri muHarare. Nhare yangu 0775 981 239.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane rudo, handina mwana uye ndine makore 31 okuberekwa. Ari pachokwadi asina mukadzi ngaandibate pa0734 795 317.
Ini ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 20 kusvika 28 chero ane mwana. Ndine makore 30 ndinonzi George Doubt, ari pachokwadi ngaandibate pa0782 975 254.
Makadini henyu? Ndiri mudzimai ane makore 31 ndingafarewo ndikawana murume anondida nemoyo wose ane makore 34 – 45. Ndine vana 2, nhare yangu 0776 463 717.
Ndiri mukomana ane makore 20 ndinodawo musikana ane makore 18 kusvika 20. Nhare yangu 0778 803 560.
Makadini? Ini ndiri mukomana ane makore 25 ndotsvakavo musikana ane makore 23 zvichidzika asina chirwere. Ngaandibate paWhatsApp pa0715 921 050.
Makadii veKwayedza? Ndokutendai nechirongwa chenyu, ndakawana shamwari yandaitsvaka saka vanhu ngavachirega kundifonera pa0783 744 480.
Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvagawo mukadzi anoda kuroorwa ari pachokwadi ane makore 20 kusvika 28, chero ane mwana. Nhare yangu 0782 975 254. Ndinonzi George Doubt, ndine mwana mumwe chete.
Ndiri mukomana ane makore 20 ndinotsvagawo shamwari (penpal) yechisikana. Anoda ngaandibate pa0777 031 597.
Ndiri mukadzi ane makore 24 nevana 2, ndinoda murume ane makore 28 – 40. Andida ngaandibate pa0775 517 001.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 20 ndinodawo musikana asina chirwere anoenda kuchechi aine makore 18 – 20. Nhare yangu 0771 673 162 asi macall me back handidi hangu.
Ini ndiri murume ane makore 34 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane hunhu hunozadza mukombe aine makore 20 – 30. Ndinoda anoenda kumasowe uye vakadzi vevanhu siyanai neni. Nhare yangu 0773 128 641.
Makasimba here? Ini ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvagawo musikana akanaka wekuroora ari pachokwadi asingarwari seni. Mutete ane muviri wakaumbwa zvakanaka ngaandibate pa0777 502 037.
Ndiri murume ane makore 27 okuberekwa ndinotsvaga mukadzi anoda zvemba asina chirwere nekuti ini handina. Ndibatei pa0782 899 447.
Ndiri mukadzi ane makore 21 nemwana 1 ndiri kutsvagawo murume anoda zvemba ane mwana mumwe. Ndiri HIV negative, andifarira ngaandibate pa0779 194 344.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 26 nemwana mumwe chete ndoda musikana anoda zvemba akazvipira kunoongororwa aine makore 23. Anoda ngaandibate pa0772 967 613.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23, ndiri kutsvagawo shamwarisikana. Andifarira ndibate pa0777 141 412.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ndiri murume ane makore 31 ndinotsvaga mukadzi ane makore 25 kusvika 35. Ndinoda ane ma’hips’, anoshanda ari mushava. Ndinobatika pa0779 202 757.
Ndiri mudzimai ane vana ndotsvagawo murume ane makore 50-54. Ndiri HIV negative, ane mazirudo ngaandibate pa0774 020 911.
Ndiri mukadzi ane makore 29 ekuberekwa nevana 2, ndinotsvakawo shamwarirume. Anondida ngaandibate pa0778 161 355.
Ndiri murume ane makore 45, handina mwana uye ndinodawo mukadzi ane makore 18 kusvika 40 asina mwana. Ngaandibate pa0779 512 991.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvaga shamwari yechisikana. Andifarira ndibate pa0777 141 412.
Ndinotenda veKwayedza ndakawana wangu wandinoda saka vaifona pa0773 350 202 chiregai zvenyu.
Ndiri murume ane makore 32 ndotsvagawo musikana kana mudzimai ane makore 18 kusvika 30. Nhamba yangu 0738 974 430, kufona kana sms.
Makadiiko? Ndiri mukadzi ane makore 30 ndinodawo murume ane makore 40 ari pachokwadi uye vane vakadzi kwete. Ndinobatika pa0772 504 555.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 21 handina chirwere ndinonzi Bruce uye ndinoshanda kukambani inoita zvekuviga vafi saka ndinodawo musikana anoziva kutsvaga mari ane makore 19. Handina mwana, nhare yangu 0771 989 053.
Ndiri murume ane makore 47 ndinotsvaka mudzimai ane makore 35 — 40 anofarira zvomusha. Nhare yangu 0775 162 896.
Ndiri musikana ane makore 22, ndinotsvagawo mukomana ane makore 28 zvichidzika anoenda kuchechi asi varume vevanhu kwete. Nhare yangu 0776 166 416.
Ndiri musikana ane makore 18, HIV positive uye ndotsvagawo mukomana ane makore 29 zvichidzika ari positive seni asi asingaratidzike. Ngaave anoshanda, anoenda kuchechi. Nhare yangu 0778 076 030.
Ini ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvagawo musikana anoda zvekuroorwa ari pachokwadi ane makore 18 kusvika 24. Nhare yangu 0782 689 836.
Ndiri mukadzi ane makore 37 nevana 3 ndodawo murume ane makore 40 zvichikwira anonamata wekuManicaland. Anondida anotumira sms pa0775 795 708.
Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1 ndinodawo mukadzi kana musikana ave kuda zvemurume kwete pfambi. Ngaave anopinda chechi yeJohane Masowe, ndiri muHarare anoda nezvangu 0782 197 644.
Ndiri mukadzi ane makore 40 nevana vatatu ndinotsvagawo murume ane makore 41 – 50 ari HIV positive uye ane rudo. Andifarira anondibata pa0771 009 922.
Makadii henyu veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 25 nemwana 1, ndinogara kwaMutare uye ndinodawo shamwarirume ine makore 35 kusvika 47 asi varume vevanhu kwete. Ari pachokwadi ndibate pa0717 277 846.
Makadii zvenyu? Ini ndiri murume ari kutsvagawo musikana anoda zvemba ane makore 18-25. Ndiri HIV negative, nhare yangu 0771 925 906.
Makadii? Ndine makore 39, ndinodawo shamwari yechikadzi ine makore 30 – 40 inoshanda uye ichigara muHarare. Nhamba yangu 0773 476 865.
Ndotenda veKwayedza nebasa renyu, ndiri mukomana ane makore 28 ndiri kutsvagawo musikana ane makore 21-25, anoda zvekumusha uye asiri pamushonga. Akanakawo ngaandibate pa0733 826 116.
Ini ndiri murume ane makore 43 ndinotsvakawo mudzimai ane makore 28 kusvika 34. Ndiri HIV positive, ndinoda chero ane vana vaviri. Vanoda nhare yangu iyi 0714 330 996.
Ndine makore 35 ndodawo mukadzi ane makore 26 kusvika 18. Ndoita mabasa emawoko uye ndine mwana mumwe. Anondida achida kunotorwa ropa ngaafone pa0776 134 568.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 19 nemwana 1 ndotsvagawo mukomana ari pachokwadi anoshanda ane makore 27 – 35. Anoda ngandibate pa0776 648 889.
Makadii henyu veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvakawo musikana ane makore 18-22. Anoda zvemba ngaandibate pa0771 115 896.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 38 nevana 3. Ndinodawo murume ane makore 39 kusvika 50 ari pachokwadi asina mukadzi, nhare yangu 0716 983 365.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo mwanasikana akanaka. Anoda anouya kwaRusape ane makore 20 zvichidzika. Nhare yangu 0783 278 779.
Ndiri mukomana ane makore 20 ekuberekwa ndinotsvakawo shamwari (penpals), kunyanya vane hunyanzvi hwekunyora nhetembo dzeShona neChiRungu. Nhare yangu 0777 568 911.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 26 ari pachokwadi anoshanda kana asingashande.
Anoda zvekuvaka musha neni ari HIV negative ngaandibate pa0774 553 617.